कक्षा १२ को परीक्षा पुरानै ढाँचामा:: Naya Nepal
काठमाडौं, असोज २० । कोरोना संक्रमणका कारण ६ महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थी उपस्थितिकै आधारमा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।
तीन दिनअघि पठाएको सुझावसहितको प्रस्तावमा कक्षा १२ को विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा भएको र स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षा नै मान्य हुने भएकाले उपस्थितिकै आधारमा परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पठाएको उपसचिव विदुरराज गिरीले जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डले १२ को परीक्षा सञ्चालनबारे सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा भदौ अन्तिम साता बुझाएको थियो। उपसचिव गिरीका अनुसार सो परीक्षा लिखित रूपमै सञ्चालनको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पुरानै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। चार लाख ३३ हजार एक सय ८० विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा रहेका छ ।
अनपेक्षित विजेताको सम्भावना ?
लेस्टर सिटीले २०१५/१६ को सिजन लिग जित्ने छ भनेर कसैले पनि सोचेकै थिएनन्, तर उसले जितेर भने देखाइदियो । त्यसैले नयाँ शब्दावलीकै जन्म भयो, ‘लेस्टर सिजन’ । हुन सक्छ, यसपल्ट पनि यो ‘लेस्टर सिजन’ को पुनरावृत्ति हुनेछ ।
लन्डन — पत्याउनै गाह्रो हुने नतिजाको शृंखलाले देखाएको छ, यसपल्टको इंग्लिस प्रिमियर लिग अति साह्रो अनुमान लगाउनै गाह्रो प्रतियोगिता हुने छाँट छ । फरक परिस्थिति र वातावरणमा अहिले चलिरहेको प्रतियोगितामा हुन सक्छ, यसपल्ट अनपेक्षित विजेताको सम्भावना पनि रहेको छ ।
लिभरपुलमाथि ७–२ को जित हात पारेपछि एस्टन भिल्लाका खेलाडीहरू  (बायाँ) र लिभरपुलका मोहम्मद सलाह पराजयपछि निराश मुद्रामा ।
म्यानचेस्टर सिटीले गत सप्ताहन्त इतिहादमै लेस्टर सिटीको हातबाट पाँच गोल खायो । त्यस मैदानमा भएका ४ सय ३५ खेलमा सिटीले यति धेरै गोल खाएको यो पहिलोपल्ट थियो । लिभरपुल पनि के कम ? लिग च्याम्पियन टिम लिभरपुल एस्टनभिल्लासँग असाधारण रूपमा ७–२ ले पराजित भयो । यस्तोमा इंग्ल्यान्डको माथिल्लो डिभिजनमा च्याम्पियन टिमले सात गोल खाएको यो १९५३ यता पहिलो रह्यो । त्यति बेला आर्सनलले सन्डरल्यान्डसँग यस्तै नियति बेहोरेको थियो । जे होस्, यसपल्ट सामान्य मान्न नसकिने स्थितिमा फुटबल चल्दैछ र गोलको त बहार नै आएको छ । लिभरपुलको त्यो खेल अगाडि म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि स्तब्धपूर्ण हार बेहोर्न बाध्य रह्यो ।
टोटनहमले उसलाई ६–१ ले हरायो । यस्तोमा लिगको यो चरणमै मात्र ४१ गोल भए । गत महिना मात्र एकै चरणको खेलमा सर्वाधिक गोल भएको कीर्तिमान बनेको थियो, यस यसपल्टको संख्या त्यो कीर्तिमानबाट तीन गोल मात्र पछाडि रह्यो । अहिलेसम्मको प्रवृत्तिले देखाएको छ, प्रिमियर लिग वास्वतमै अनुमान नै गर्न नसकिने प्रतियोगिता भएको छ, अनि यसले लिगलाई आफैंमा बढी सनसनीपूर्ण पनि बनाएको छ । लिभरपुलका पूर्वरक्षक जेमी क्यारिघर भन्छन्, ‘म त लिग यस्तै होस भन्ने चाहन्छु ।’
सिनेमा हल खुले पनि नखुले पनि आगामी कात्तिक ७ गते फूलपातीका दिन रिलिजको घोषणा गर्दै फिल्म लक्ष्मीपूजाको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। सलोन सलिना फिल्म्स्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको टिजर सस्पेन्स र रिभेन्ज फ्लेभरको छ।
बुढासुब्बा डिजिटलबाट सार्वजनिक टिजरमा फिल्मका कलाकारहरु जाहान्वी बस्नेत, जयकिशन बस्नेत, सलोन बस्नेत, रियाशा दाहाल, नीर शाहलगायत फिचर्ड छन्। समीर मियाँको निर्देशन रहेको फिल्ममा शोभित बस्नेत निर्माता छन्। फिल्ममा जयकिशन बस्नेत, जाहन्वी बस्नेत, अस्मिता जुुरेली, नीर शाहको अभिनय रहेको छ। फिल्ममा सलोन बस्नेत र रियाशा दाहाल विशेष भूमिकामा देखिनेछन्।
निर्माता शोभितका अनुसार जाहन्वीको शीर्ष भूमिका रहने फिल्ममा उनी दोहोरो भूमिकामा देखिँदै छिन्। फिल्ममा विपीन आचार्यको संगीत, दयाराम पाण्डेको गीत, केदार भुसालको लेखक, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी र जयकुमार दर्लामीको छायांकन रहेको छ। शोभितले हल खुले हलबाट अन्यथा डिजिटल बजारबाट आप्mनो फिल्म रिलिज गर्ने बताएका छन्।
पहिराे पीडितलाई प्रदेश सरकारकाे सहयोग
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाका पहिराे पीडितलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराएको छ।ढोरपाटनमा गत भदौ १७ गतेको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका २२ परिवार र बेपत्ता रहेका १५ परिवार गरी ३७ जनाको परिवारलाई प्रति मृतक/बेपत्ता ५० हजार रूपैयाँका दरले गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत रकम प्रदान गरेको हो।
त्यस्तै निसीखोला र तमान खोला गाउँपालिकामा गत असार र साउनमा आएकाे पहिरोमा परी मृत्यु भएकाका पाँच परिवारका लागि पनि राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सोमबार पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत रकम प्रदान गरे।
जिल्लाको पश्चिमका ४२ परिवारका लागि प्रदेश सरकारले २१ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।ढोरपाटनको बोबाङमा पहिरोसँगै आएको बाढीका कारण घरगोठ पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये २२ जनाको शव फेला परेको थियो भने १५ जना अझै बेपत्ता छन्।ढोरपाटनमा बाढीपहिरोमा १३० घर विस्थापित भएका छन्।